तपाईको भाग्यमा सरकारी जा´गिर छ कि छैन ? हत्केलाको रेखा हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् – Butwal Sandesh
तपाईको भाग्यमा सरकारी जा´गिर छ कि छैन ? हत्केलाको रेखा हेरेर पत्ता लगाउनुहोस्
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार व्यक्तिले जन्मदै भाग्य लिएर आएको हुन्छ । उक्त भाग्य विभिन्न ग्र,हहरुको यो,गमा आ,धारित रहेको हुन्छ । जन्म समय स्थानका आधारमा तयार हुने कु*ण्डली वा चिनाका आधारमा त्यसलाई वर्णन गर्न सकिन्छ ।
ज्योतिष शास्त्रका को अनुसार हाम्रो हातमा यस्तो रेखा हुन्छ जसले सरकारी नोकरीको संकेत गर्ने गर्दछ । यी रेखालाई पढेर तपाई आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईलाई सरकारी नोकरी मिल्छ कि मिल्दैन । जान्नुहोस् यस्ता रेखाहरु बताउँछन् तपाईलाई सरकारी नोकरी मिल्छ कि मिल्दैन ।
शनि पर्वत शनि पर्वतु जीवनमा कर्म र भाग्यको निर्धारण गर्ने रेखा हो । शनि पर्वत ज्यादै उठेको छ वा भित्र ध*सिएको छैन र सामान्य छ भने यो पनि सरकारी नोकरीको संकेत हो ।
सूर्य पर्वत यदि तपाई राजनीतिको क्षेत्रमा मन्त्री वा सचिव बन्न चाहानुहुन्छ भने एकपटक आफ्नो हत्केलाको सूर्य पर्वतको जाँच गर्नुहोस् । यदि यो रेखा सीधा वा टुटेको छ भने पनि क*डा मेहनत गरेपछि यो पद मिल्न सक्नेछ ।